We Fight We Win. -- " More than Media ": ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် အတွက် ပမဏရွေးချယ်ထားသည့် သရုပ်ဆောင် ၁၃ ဦး လူတွေ့စစ်ဆေး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင် အတွက် ပမဏရွေးချယ်ထားသည့် သရုပ်ဆောင် ၁၃ ဦး လူတွေ့စစ်ဆေး
ယနေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နံနက် ၉နာရီတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရုံး ၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နေရာတွင်သရုပ်ဆောင်ရန် ပဏာမရွေးချယ်ထားသော ၁၄ ဦး အနက် လာရောက်သူ (၁၃)ဦးအား လူတွေ့စစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည်။ သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် အကဲဖြတ်ဒိုင်လူကြီးများဖြစ်ကြသော ဦးညွှန့်ဝင်း ၊ ဦးအောင်လွင် ၊ ဦးကြည်စိုးထွန်း ၊ ဦးချစ်ဦးညို ၊ ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက် ၊ ဒေါ်အိအိခိုင် ၊ ဒေါ်ကြည်ဖြူသျှင် ၊ ဦးဇင်ဝိုင်း ၊ ဦးလူမင်း ၊ ဦးဝေဠုကျော် နှင့် ဦးဇာဂနာ တို့မှ အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခဲ့ကြပါသည် ။ မကြာမီ နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၃ ဦး စာရင်းကို သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ ပေးမည် ဖြစ်ပါသည် ။ သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ရေး နှင့် ပတ်သတ်သော အခြား သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များရှိလျှင် လည်း ဆက်လက်ပြီး အသိပေး ထုတ်ပြန် ပေးသွား မည် ဖြစ်ပါသည် ။
For the Movie, I suggest you choose the gentleman, the one in the first row ( 3rd person). He is wearingauniform and hasasimilar hairstyle to that of Bo-Gyoke Aung San between the guy who is wearing the blue and black checkered pasoe and the guy with the red pasoe.
8 April 2012 at 05:13
ကျန်တဲ့ ကိုဇင်ဝိုင်းတို့ ဦးအောင်လွင်တို့အားလုံးကို လက်ခံပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီညွန့် ဝင်းဆိုတဲ့ လူယုတ်မာကြီးကဘာဝင်ပါတာလဲ။ ကျနော်တို့၈၈ အစမှာ ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်ကဆင်းပြေးရတုန်းက လုံထိမ်း တွေ အသေလိုက်ရိုက် လိုက်ဖမ်းချိန်မှာ သူ့ ခြံကို အားကိုးတကြီး ၀င်ခွင့်တောင်းတာ ရဲကိုဖုန်းဆက်တယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ ဆက်ပြေးခဲ့တဲ့သူတွေလွတ်တယ် ကျန်သူတွေအဖမ်းခံရတယ် ခုထိသေသလားရှင်သလားမသိတော့ဘူး ။
နောက်တခု အဖေနဲ့ သားများတို့၊ န၀တ ပေါ်လစီကားတွေ တီဗီစီးရီးတွေမှာ ဒီလူယုတ်မာက တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လုပ်နေခဲ့တဲ့သူ ။ အဲဒီလူယုတ်မာကို ဘယ်လို စိတ်ကူးမျိုးနဲ့ဒီ ဗိုလ်ချုပ်ဇာတ်ကားဖြစ်မြောက်ရေးထဲဆွဲထည့်တာလဲ ရူးနေကြပြီလားဗျ